DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland oo sheegay in lagu fashilmay in xal laga gaaro khilaadka DF Somaliya iyo Puntland | HalQaran.com
Home Wararka Maanta DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland oo sheegay in lagu fashilmay in xal laga...
DAAWO VIDEO: Madaxweynaha Puntland oo sheegay in lagu fashilmay in xal laga gaaro khilaadka DF Somaliya iyo Puntland
Garowe (Halqaran.com) – Madaxwaynaha dowlad goboleedka Puntland, mudane Siciid Cabdullaahi Deni oo ay weheliyaan Madaxwayne ku Xigeenka, guddoomiyaha Golaha Wakiillada iyo masuuliyiin ka socday DF Soomaaliya iyo Marti sharaf kale ayaa ka Qayb galay Shirwaynaha Wadatashiga Puntland oo Axaddii maanta ka furmay Magaaladda Garowe.
Mudane Saciid Deni ayaa Shirkan ka jeediyey Khudbad dhinacyo badan taabanaysa ayaa ka hadlay Xaaladihii kala duwanaa ee Puntland ay soo martay.
Wuxuu xusay in 22-Sanno kadib, in Puntland ay gaartay Horumar, Sida Dhismaha ciidamada, Hanaan Dawladnimo, Kaabayaal dhaqaalle iyo Horumarinta Adeegyadda Bulshada.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in ay Caqabado Siyaasadeed, Kuwa Amni oo ka yimid Cadow kala duwan oo ka samin waxyeelaynta Puntland.
“Waxaa Muhiin nala Noqotay oo Shirkan aanu ugu baaqnay inay isku Waydiino oo ka Jawaabno, Maxaa inooga Qabsoomay Wixii Puntland loo dhisay, Maxaa Qabyo inooga ah, Maxay Yihiin Caqabadaha ka Jira Gudaha Puntland ee u baahan in wax laga Qabto, Maxaa ka Qabsoomay u jeedooyinkii in la Helo Dawlad Soomaaliyeed ee Federaal ah” ? ayuu yiri Siciid Deni
Geesta Kale, Saciid Deni ayaa Khudbadiisa uga hadlay Horumarka kala duwan ee Puntland ay ku taalabsatay muddooyinkii ay jirtay dhinaca Ganacsiga, Waxbarashada, Caafimaad iyo Maalgashiga .
Wuxuu ka hadlay Kaalinta Puntland ay ka Qaadatay dib u dhiska Dawladnimo Soomaaliyeed, isagoona sheegay inay Puntland Hormuud u ahayd dhismaha DF Soomaaliya ee maanta dhisan.
“Wanaaga Iyo Sharafta Puntland waxay ku Jirtaa wanaaga Soomaali Idilkeed Shacab iyo Dawladba”, ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Ugu dambeyn, mar uu soo hadal qaaday Khilaafka dawladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland ayuu sheegay inay hareer mareen waxyaabihii lagu dhisay, oo ay doonayaan inay awooda Maroorsadaan, Islamarkaana ay Caburin ku hayaan maamulada dalka, Iyadoo aan inaan Mudnaan lasiin Dhamaystirka Dastuurka, Dhismaha Ciidanka , La dagaalanka Al-Shabaab, iyo Qabsoomida Doorashada.
Balse wuxuu sheegay inay sameeyeen Sharciyo danno gaar ah laga leeyahay, islamarkaana Deeqihii Caalamka aan si Hufan loogu qaybin dadka Soomaaliyeed, oo arrimo siyaasadeed loo isticmaalay, sida uu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni.
Halka hoose ka daawo Muuqaalka Khudbadda Madaxweyne Saciid Deni:
Waa uu fashilmay in xal laga gaaro khilaadka DF Somaliya iyo Puntland
Cismaan Cawad March 15, 2020 At 17:40
In ay Dowladda Federaalku iyo maamulladu mediaha isku weeraraan waxay muujinaysaa sida xun ee ay uga arradan yihiin xirfadda hoggaamineed iyo asluubta diblumaasiyadeed ba. Filsamida dowlad wanaagga waxaa lgu gartaa miiska wada hadalka, baarlamaanka iyo maxkamadaha oo waxii is maandhaaf ah lala kaashado oo loo na tiigsado. Ma aha shacabweynaha oo hortooda afka la iskaga weeraro sida Soomaaliya laga caadeystay.
Puntland ciladda haysata waa mid aanay iyadu ba dhaadanayn xaqiiqdii. Puntland waxaa ku geedaamaan mushkilad aan ku tilmaami karo “identity crisis” oo salka ku haysa in ay la jahawareersan tahay waxa uu mansabkeedu yahay iyo dowrka ay ku leedahay Soomaaliyada guud. Iyada ayaan mansabkeeda aasaasiga ah wali fahmin oo bayaan u qeexin. Anigu mansabkeedaas waan aqaannaa oo jeer ay iyadu dhaaddo oo ay rugteeda ka yeelato cakirnaantani in ay sii rakato mooyaanee dhakhsahaas u rafci mayso.
Daraasad mandaqan ayay Puntland iyadu mansabkeeda marka hore ku xasili kartaa inta aanay cid kale is fahmin. Miyay jiraan aqoonyahannadii dhankaas wax ka soo abbaari lahayd oo heerkaas ka bisil?